Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha L3 - Shiinaha L3 Warshad Beddel
S5750E-26X-SI L2 Dual Stack 40G Fibre Feker Sirdoon
Wareegtada S5750E-26X-SI waa jiil cusub oo wadar garayn caqli-gal ah iyo marin-u-helitaan loogu talagalay oo ay nashqadeeyeen DCN oo loogu talagalay side iyo shabakadaha MAN. S5750E-26X-SI waxay bixisaa 24 10GbE (SFP +) iyo 2 40GbE (QSFP) dekedo jireed iyo sahay koronto oo xad dhaaf ah, oo loogu talagalay aragtida marinka 10G iyo shabakada guud ee isku xirnaanta 10G oo leh astaamo naqshad fasal telecom oo kalsooni sare leh, iyo dib u dhac. Astaamaha Muhiimka ah iyo waxyaabaha muhiimka ah ee Waxqabadka iyo Iskeelka 10 Gigabit Ethernet isku xirnaanta S5750E-26X-SI ...
S5750E (R2) Dual Stack 10G Ethernet Marinka Fiber Furaha
Wareejinta taxanaha DCN S5750E ayaa ah fiilooyin buuxa oo isku dhafan oo lebbiska leh oo leh dekedo isku xirxira 10GbE oo isku dhegan. Wareegyadan si buuxda loo maareeyay waxay bixiyaan helitaan sare, miisaan, amniga, waxtarka tamarta, iyo hawlgal fudud oo leh sifooyin L3 hodan ah. Waxay ku habboon tahay isu-soo-ururinta ama marin-u-helka xerada, ganacsiga, shabakadaha iyo bixiyeyaasha adeegga. Astaamaha Muhiimka ah iyo Waxqabadka Muuqaalka iyo Cabirka Iyada oo leh awood sarreysa oo sarreysa, taxanaha S5750E (R2) wuxuu taageeraa silig-xawaaraha L2 / L3 forwardi ...
S5750E (R2) Dual Stack 10G Ethernet Router Copper Switch
Wareegyada taxanaha ah ee DCN S5750E waa shuruudo ganacsi oo heer sare ah oo iswaafaqsan oo leh dekedo kor u dhaafaya 10GbE. Wareegyadan si buuxda loo maareeyay waxay bixiyaan helitaan sare, miisaan, amniga, waxtarka tamarta, iyo hawlgal fudud oo leh sifooyin L3 hodan ah. Waxay ku habboon tahay isu-soo-ururinta ama marin-u-helka xerada, ganacsiga, shabakadaha iyo bixiyeyaasha adeegga. Astaamaha Muhiimka ah iyo Waxqabadka Muuqaalka iyo Cabirka Iyada oo leh awood sarreysa oo sarreysa, taxanaha S5750E (R2) wuxuu taageeraa silig-xawaaraha L2 / L3 ...